४० वर्ष माथिका जनताका लागि भन्दै देउवा सरकारले गर्यो यस्तो घोषणा, कहिलेदेखि हुन्छ लागु ? — Sanchar Kendra
काठमाडाैं । सरकारले ४० वर्ष उमेर समूह माथिका सबै नागरिक ६५ लाख ३७ हजार ३ सय २९ जनाको पिसाब जाँच गर्ने घाेषणा गरेकाे छ । देशका प्रत्येक वडा वडामा पुगेर पिसाब जाँच गर्ने तयारी रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. कृष्ण पौड्यालले जानकारी दिए ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मिर्गौला रोगबाट जोगाउन पूर्व सुरक्षाका लागि यो अभियान सुरु गर्न लागिएको बताए । ४० बर्ष माथिका देशभरका नागरिकको पिसाब जाँच गर्नका लागि प्रतिव्यक्ति ५० रूपैँयाको दरले ३२ करोड ६८ लाख ६६ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए ।
स्वस्थ मानिसको पिसाब थैलीको क्षमता भनेको २ सयदेखि ३ सय मिलिलिटरसम्मको हुन्छ । उक्त थैली भरिनेवित्तिकै मानिसलाई पिसाब फेर्न मन लाग्छ । एक दिनमा एउटा मानिसले ४ देखि ६ पटकसम्म पिसाब फेर्छ भने त्यसलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ । तर, त्योभन्दा धेरै र कम पिसाब आउँछ भने त्यसलाई समस्याका रुपमा लिन सकिन्छ ।
पिसाब कम आउनुको कारण मानिसले कम मात्रामा पानीको सेवन गरेर पनि हुनसक्छ । कम पानी पिउँदा पिसाब थैलीमा संक्रमण हुने खतरा रहन्छ । यस्तै पिसाब लाग्दा लामो समयसम्म रोक्दा पनि पिसाब थैली तथा नलीमा संक्रमण हुन सक्छ । सामान्यतया पिसाबको रंग हल्का पहेँलोदेखि अलि गाढा पहेँलोसम्म हुन सक्छ । यदि अचानक पिसाब पहेँलो आएको छ र पानी खानेबित्तिकै पहेँलोपन हराउँछ भने चिन्ता गर्नुपर्दैन । तर, एकभन्दा बढी दिन यस्तो भयो भने स्वास्थ्यमा समस्या निम्तिएको हुन सक्छ ।
पिसाब नली तथा थैलीमा संक्रमण हुनुको कारणमा व्यक्तिगत सरसफाइको कमी, यौनांगको सफाइमा ध्यान नदिनु, यौन सम्पर्क, अन्य संक्रमण, पानीको कम सेवन, अशुद्ध पानीको सेवन, पिसाब फेरिसकेपछि पूरै ननिस्कनु नै हो । संक्रमण गराउने ब्याक्टेरिया आकाश तथा पातालबाट आउने नभई पिसाब तथा पिसाब थैलीबाट नै आउने हो । सामान्यतया एक मिलिलिटर पिसाबमा एक सयदेखि एक हजार ब्याक्टेरिया छ भने त्यसले कुनै असर गर्दैन तर त्यो संख्या बढेर पाँच गुणा बढी भयो भने समस्या निम्तिने गर्छ ।
पानीको सेवन कम गर्दा पनि ब्याक्टेरियाको संख्या बढ्ने खतरा रहन्छ । त्यस कारण गर्मी क्षेत्रमा डिहाइड्रेसनको समस्या भयो भने पनि पिसाबको संक्रमण हुन्छ । मानिसहरुमा विभिन्न समस्याका कारण रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको समयमा पिसाबको संक्रमण बढी हुन सक्छ । यसका साथै मिर्गौला तथा पिसाब थैलीमा हुने पत्थरी, गर्भवती, मेनोपोज भएका महिला, मधुमेह, क्याथेटर राखिएको मानिस, जन्मजात समस्या तथा विभिन्न केमिकलको प्रयोगका कारणले पनि पिसाबमा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
पिसाबको संक्रमणबाट जोगिनका लागि प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, अमिलो फल जस्तै कागती, मौसम, सुन्तला खाने । यी फलमा साइट्रस एडिस हुन्छ जसले मूत्र संक्रमण गराउने जिवाणु नष्ट गर्न सहयोग गर्छ । यस्तै यौनांगको सरसफाइसँगै व्यक्तिगत सफाइमा ध्यान दिने, शुद्ध पानी पिउने, नुहाउँदा तेल लगाएर नुहाउने तथा पिसाबको विभिन्न समयमा जाँच गर्ने गर्नुपर्छ ।
पिसाब पोलेकोजस्तो अनुभव हुनेवित्तिकै मानिसहरु आफूखुसी एन्टिबायोटिक खान्छन् । त्यो सरासर गलत काम हो । पिसाबको संक्रमणलाई सामान्य रुपमा लिएर हेलचेक्राइँ गर्दा गम्भीर समस्या निम्तिने खतरा रहन्छ । यस्तो समस्या भएमा पिसाबको ल्याब परीक्षण गराउने र चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम मात्र औषधि खाने गर्नुपर्छ ।